Online Juction Feed: 2015-01-04
जीन्दगीदेखी हारेको मान्छे म त (गजल)
आफनै दुखी जिन्दगीसँग हारेको मान्छे म त
कालले छोडी जिन्दगीले मारेको मान्छे म त
मन भरि बेदना छ यी आँखा भरि आँसु
खुसी के हो थाहै छैन खै कसो गरी हाँसु
सारा सुख बिधाताले बारेको मान्छे म त
अनायसै उल्टो बनी यो समय गति
सहनलाई गाह्रो हुने हरेक दुख जति
भाग्यले मेरै जिन्दगीले मारेकॅ मान्छे म त
आफ्नै दुखी जिन्दगीले हारेको मान्छे म त
"तपाईंको वचन मेरो पाउको लागि बत्ती हो" - ई-बुक डाउनलोड
तपाईंको वचन मेरो पाउको लागि बत्ती हो - त्रैमासिक नेपाली वाइइबल अध्यन (doc. format) मा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
Labels: धार्मिक ग्रन्थको ई-बुक
एन. टि. सी. अनलिमिटेड फ्रि कल ह्याकिङ टिप्स
के तपाइले नेपाल टेलिकमको ग्राहक बनेर आफ्नै मोबाइलमा अनलिमिटेड फ्रि कलको कल्पना गर्नुभएको छ ? तपाइको कल्पना सत्यमा परिणत हुन सक्छ यो ह्याकिङ ट्रिक्स पढ्नुहोस् :
सर्बप्रथम अनलिमिटेड फ्रि कलको लागि ह्याक गर्न खोज्नुभएको दुइटै नम्बरको सेक्युरिटी कोड थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ । तर स्मरण रहोस् यो ह्याकिङ ट्रिक्स बेलुका १० बजेपछि लागू हुन्छ । पहिला "Hack" अथवा चिन्ने गरेर आफ्नै तरिकाले लेखेर तपाइले अनलिमिटेड फ्रि कल गर्न चाहनुभएको मोबाइल नम्बर आफ्नो मोबाइलमा सेभ गर्नुहोस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको सबै रकम उक्त नम्बरमा ट्रान्सफर गर्नुहोस् ।
# ट्रान्सफर तरिका :
*422*सेक्युरिटी कोड*अर्को मोबाइल नंम्बर*तपाईंको मोबाइलमा रहेको सबै ब्यालेन्स (पैसामा)# टाइप गरेर कल बटन थिच्ने ।
मानौं, तपाइको मोबाइलमा रु. १० छ भने- *422*24230347*9846230602*100#
यसरी तपाइको मोबाइलमा भएको ब्यालेन्स सबै अर्को मोबाइलमा ट्रान्सफर हुन्छ । अब तपाइले 'Hack' अथवा आफ्नै तरिकाले चिन्ने गरेर लेखेर सेभ गर्नुभएको नंम्बरमा निःशुल्क डायल गर्न सक्नुहुन्छ । तपाइले नेपाल टेलिकमको आई भि आर सेन्टर १४१४ डायल गरेझै वा १४९८ डायल गरेर टेलिकमको टोल फ्रि नम्बरमा निःशुल्क बोलेझैं जति समय चाहनुहुन्छ त्यति बोल्न सक्नुहुन्छ तर तपाइको मोबाइलमा बिलिङ हुँदैन अथवा 0.00 मा पनि फोन गएको देख्नुहुनेछ र जति बोले पनि हुन्छ । तर कल चाही ट्रान्सफर गर्नसाथ तत्काल गर्नुपर्नेछ । अब साथीलाई पनि त्यही विधि अपनाएर तपाइको पैसा फिर्ता गरेर फ्रि कल गर्न लगाउनुहोस् । जतिपटक फ्रि कल गर्न मन लाग्छ यो विधि अपनाउनुहोस् ।
अब जोगी बन्दैन दिनमा घण्टौं फोनमा बोल्ने प्रेमी प्रेमीकाहरु ।
रहस्यमय यती हिमताल
ब्यस्त सडकको एउटा कुनामा एकजना भर्खर तरुनी महिला काखमा नानी राखेर ओहोर दोहोर गर्ने मानिसहरूसँग भिख मागीरहेकी छे । कसैकसैले मात्र उसलाई ध्यान दिन्छन् । तर म भने उसको दीन दरिद्र अवस्थाले द्रवित भएर सोध्छु “बैनी, नानी रोइरहेको छ । दुध खुवाए हुँदैन ?”
“यो काखको नानी मेरो नानी होइन, मेरो लोग्ने हो ।” उसको जवाफ सुनेर छक्क पर्दै म सोच्न थाल्छु, उसको दिमागी तन्तुहरू पनि खुस्केको हुनु पर्छ । “काखको नानी कसरी तपाईँको लोग्ने हुन्छ ?” म सोध्छु । ऊ केही बेर खिन्याउरो दृष्टिले पर टाढा हेर्छे र मलाई भन्छे - “यो काखको नानी मेरो लोग्ने हो । हामी लोग्ने स्वास्नी यहाँबाट हजारौँ किलोमिटर टाढा हिमालयको फेदिमा बस्थ्यो । खेती किसानीका साथ भेडा पालन हाम्रो पेसा थियो । त्यहाँ हामीले पचास वर्षभन्दा बढि सँगसँगै बसेर छोराछोरीहरू हुर्कायौँ । ठूला भएपछि छोराछोरीहरू गुडबाट उडेको बचेराझैँ टाढा गए । खे कहाँ गए फर्केर आएका छैनन् ।”
“त्यो दिन म मेरा भेडाका पाठाहरू हराइरहेकाले हिउँले सधैं ढाकिरहने हिम रेखाभन्दा माथिको अग्लो स्थानमा पनि गएँ । त्यहा मैले यतीका पाइलाहरू देखेँ । ती पाइलाहरू पछ्याउदै जाँदा एउटा हिमतालमा पुगेँ । थाकेको र प्यास पनि लागेकोले त्यसको पानी खाएँ । पानी खानासाथ म ६७ वर्षकी बूढी १७ वर्षकी तरुनी भएछु । त्यही तालको सङ्गलो पानीमा आफ्नो रूप हेरेर दङ्ग पर्दै म घर फर्किएँ । घरमा मेरो लोग्नेले मलाई चिनेनन् । मैले सबै कुरा बताएपछि ऊ पनि त्यहा जाने भए । भोलिपल्ट बिहानै ऊ त्यता गए । तीन दिनसम्म पनि उनी फर्केर नआएकोले खोज्दै म त्यही हिमताल पुगेँ । त्यहाँ मेरो लोग्ने त सानो नानी भएर किनारामा लडिरहेका थिए । तन्नेरी बन्ने लालसाले उसले बढी पानी खाएकाले सानो बच्चा भएका रहेछन् । त्यसपछि उनलाई बोकेर म गाउँ फर्किएँ । गाउलेहरूले हामीलाई चिनेनन् । हाम्रो कुरा पनि पत्याएनन् र पागल भनेर त्यहा बस्न समेत दिएनन् । त्यसपछि आफ्नो लोग्नेलाई बोकेर म एक महिना हिडेर यहाँ आइपुगेकी हुँ । यहा जीविको पार्जनको केही उपाय नभएर मागेर गुजारा चलाइ रहेका छौँ ।
- January 04, 2015 Links to this post
Labels: दन्त कथा